सुनबन्दीको तयारीमा मोदी सरकार, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ? – KalaiyaLive.Com.Np
🇳🇵 जय नेपाल 🇳🇵
🇳🇵 मुख्य पृष्ठ
विरगन्जस्थित रक्सोल नाका बन्द गर्न भारतीयको दबाब आयातकर्ताहरु तनावमा
म्याच फिक्सिङलाई अपराध घोषित गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली देश बन्यो श्रीलंका
राष्ट्रपति हमिद र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता
एनसेलले ल्यायो प्रिपेड ग्राहकहरुलाई ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’ अफर
बारा : कर्मचारीकाे ६ लाख रुपैयाँ लुटियाे
बृहद रक्तदानको आयोजना
त्रिवेणी नदिमा नुहाउनेको भिड
१८ वर्ष देखि व्यवस्थापन समिति विहिन रहेको संस्कृत विधालयमा
नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ फिर्ती तीन वर्षसम्म पनि अन्यौलमै
सोशल मिडियामा हामी
कलैया 22	℃
सुनबन्दीको तयारीमा मोदी सरकार, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
कलैयालाईभ2weeks पहिले
भारतीय सरकारले नोटबन्दीपछि अब सुनबन्दीको तयारी थालेको छ ।
कालो धन रोक्नका लागि नोटबन्दी गरेको मोदी सरकारले कालो धन सुनमा लगानी गर्नेहरुमाथि अंकुश लगाउन सुनबन्दी अर्थात सुनमा समेत समय सीमा निर्धारण गर्न लागेको हो ।
छिमेकी मुलुकमा सुनबन्दी गर्ने खबर बाहिरिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा कस्तो पर्ने हो भन्ने विषय विश्लेषण हुन थालेको छ ।
त्यसो त भारतले नोटबन्दी गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको थियो । खुला सिमानाका कारण भारतमा श्रम गरेर ल्याएको पैसा नेपाली श्रमिकहरुले सटही गर्न नपाउँदा उनीहरु विचल्लीमा परेको सर्वविदितै छ ।
अझै पनि नेपाल सरकारले नोटबन्दीको क्रममा नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका करोडौं भारु सटहीको मुद्धा उठाउँदै आएको छ । नोटबन्दीको असर भोगिरहेका बेला सुनबन्दीले पनि नेपालीहरुलाई ठूलो असर पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
नेपालको सुन कनेक्सन भारतसँग प्रत्यक्ष छ । खुल्ला सीमानाका कारण भारतबाट सुनको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । अवैध तरिकाले समेत भारतबाट तस्करी हुने गरेका घटना समेत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सुनबन्दीको असर नेपालमा प्रत्यक्ष पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
नेपालको सेयर बजारमासमेत भारतीय मूलका लगानीकर्ता रहेको हुँदा सुनबन्दी योजनाले नेपालको सेयर बजारलाई समेत असर गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
कालोधनलाई रोक्नका लागि मोदी सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो भने अहिले कालोधनबाट सुन खरीद गर्नेहरुमाथि अंकुस लगाउन सुन बन्दीको कदम उठाउन लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
मोदी सरकारले अब सुनका लागि ‘एम्नेष्टी स्किम’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सुनको यो स्किम लागू भएपछि त्यहाँ रहेका नागरिकले सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी सुन राखेको वा भएको खण्डमा त्यसको सूचना समयमै सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
एमनेस्टी स्किमका लागि एक मस्यौदा समेत तयार भइसकेको र यसलाई त्यहाँको क्याबिनेटमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । एमनेस्टी स्कीम लागू भएमा बिलबिना आफूसँग रहेको सुनको परिमाणको विषयमा समेत सही जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो सुनका लागि तोकिएको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदी तोकिएको भन्दा बढी सुन राखेमा उसले जरीवाना र कडा कारबाही भोग्नुपर्ने जनाइएको छ ।
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Viber ईमेल मार्फत साझा गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुहोस्
जनकपुरमा सहकारी बैंकको ३० लाख रुपैयाँ लिएर फरार कर्मचारी
महरालाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै, आजबाट थुनछेक बहस हुने
13 hours पहिले
2 days पहिले
3 days पहिले
5 days पहिले
निजगढ भन्दा सर्लाहीको सागरनाथमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाऔं – डा. कोइराला
प्रदेशको राजधानी किन बनेन वीरगञ्ज ? तीन जिल्लाको बेग्लै राजधानी बनाउने चेतावनी
गाडी दुर्घटना हुदा सशस्त्रका एसपीको मृत्यु, सिडिओ गम्भीर घाइते
नेपाल टेलिकमले भोलिदेखि ३ महिनाका लागी यस्तो अफर ल्याउँदै, के के छन् विशेषता ? हेर्नुहोस्
कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहालाई जन्मकैदको फैसला
वीरगन्ज र हेटौडाको सडक फराकिलो पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
वार्ता गर्न गएको बेला उपमेयर माथि हांतपांत
मेन रोड मात्रै नभई भित्री राेड हरुपनि ३०, ४० र ५०फिट काे स्थ...
सुर्तीजन्य र मादक पदार्थमा देश भरिने ेे राेक लगाए सुनमा सुगन...
सब चुतियाफा हो ..नाम को लागि मात्र रहेछ ..आफु त रक्सि खाएर य...
पढ्दा त राम्रो लाग्यो तर ब्यवहारमा कत्तिको लागु हुन्छ समयले...
Kalaiya ko sabai wada ma tyasto niyam lagu garnu parxa...
dherai ramro kadam tara auta wada ma matra band gari hudaina...
Hahaha kyaa baat hai...
कलाकार मय वीरगन्ज (फोटोफिचर)
6 days पहिले
१५ प्रतिशत विद्युत्को महशुल वृद्धि गर्न विद्युत् प्राधिकरणकोे प्रस्ताव
1 week पहिले
ट्वीटरमा फलो गर्नुहोस्
विरगन्जस्थित रक्सोल नाका बन्द गर्न भारतीयको दबाब आयातकर्ताहरु तनावमा https://t.co/TY1arZmpym https://t.co/dJ7LLWcmJR
म्याच फिक्सिङलाई अपराध घोषित गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली देश बन्यो श्रीलंका https://t.co/vhlCf13MXn
राष्ट्रपति हमिद र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता https://t.co/VXYMC3pxMw https://t.co/qoMKS850tl
फास्ट ट्र्याक प्रयोग गर्न पाए अमलेखगञ्ज–काठमाडौं पाइपलाइनबाट निगम पछि हट्ने
2 weeks पहिले
चीनद्वारा नेपाली सामानको निर्यातमा रोक
3 weeks पहिले
अरुण कुमार साह
कलैया–१, मोतिबाग बारा
मोबाईल नं. : +97-9845414695
ईमेल : kalaiyalive.com@gmail.com